खेलकुद Archives - Enepal Serofero
अन्तिम मिनेटको गोलसँगै आर्मी हारबाट जोगियो
काठमाडौं । अन्तिम मिनेटमा सन्तोष तामाङको फ्रि किक गोलसँगै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी हारबाट जोगिएको छ । शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा आर्मी र न्यूरोड टिम (एनआरटी)ले २-२ गोलको बराबरी खेलेका हुन् । खेल अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका एनआरटीका गोलरक्षक अजित प्रजापतिले अन्तिममा धेरै समय बल होल्ड गर्दा आर्मीले डिबक्सभित्रैबाट फ्रि किक पाएको थियो, जसमा सन्तोषले उत्कृष्ट गोल गरेका छन् । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीले १२ औं मिनेटमा नै अग्रता लिएको थियो । उसका रोजित पुडासैनीले गोल गरेका थिए । ३८ औं मिनेटमा आर्मीका सन्तोषले पेनाल्टीमार्फत बराबरी गोल फर्काए । दोस्रो हाफमा आर्मीको प्रदर्शन केही सुधारियो तर, ६४ औं मिनेटमा राजेश परियारले उत्कृष्ट गोल गरे । खेलमा र्फकने आर्मीको एकपछि अर्को प्रयासलाई एनआरटीका गोलरक्षक प्रजापतिले असफल पारेका
बंगलादेशविरुद्ध कठिन जित हात पार्दै भारतले जित्यो एसिया कपको उपाधि
गत राति युएईमा भएको फाइनल खेलमा बंगलादेशमाथि भारतको अन्तिम बलबाट संघर्षपूर्ण जित हासिल गरेको छ । उक्त संघर्षपूर्ण खेलमा बंगलादेशमाथि अन्तिम बलबाट संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै भारतले एसिया कप क्रिकेटको उपाधि जितेको हो । भारतले बंगलादेशलाई अन्तिम बलबाट १ रन जोडेर ३ विकेटको जित निकाल्दै उपाधि चुमेको हो । बंगलादेशले दिएको २२३ रनको विजयी लक्ष्य भारतले अन्तिम ओभरको अन्तिम बलमा सात विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो । एक दिवसीय क्रिकेटको उपाधिका लागि अन्तिम बलमा जित हात पारेको यो दोस्रो पटक हो । एसिया कप २०१८ को उपाधि उचाल्दै भारत ७ पटक एसिया कपको च्याम्पियन बन्न् सफल भएको छ ।फाइनलमा शतक प्रहार गर्ने बंगलादेशी ब्याट्सम्यान लिटन दास म्यान अफ् द म्याच बने । त्यस्तै भारतका लागि ५ खेलमा ३४२ रन बनाउने शिखर धवन म्यान अफ् द सिरीज बने । उपाधिका लागि फाइनलमा भारतलाई फेभरेट मानिए पनि बंगलादेशसँग जितका लागि भा
पाकिस्तानविरुद्ध नेपालको गोलको वर्षा, रेखा एक्लैले गरिन् सात गोल
काठमाडौँ – साफ यू–१८ महिला च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाली यू–१८ महिला टोलीले पाकिस्तानविरुद्ध गोलको वर्षा गरेको छ ।भुटानको थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई १२–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । नेपालको जितमा रेखा पौडेल एक्लैले सात गोल गरिन् । रेखाले खेलको चौथो, १७औँ, १९आँै, ३२औँ र ३८औँ, ७१औँ र ७२औैँ मिनेटमा गोल गरिन् । त्यस्तै पहिलो हाफको इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा सरु लिम्बूले एक गोल गरिन् । पहिलो हाफमा ६–० ले अगाडि रहेको नेपालले दोस्रो हाफमा छ गोल ग¥यो । नेपालका लागि ६७ औँ मिनेटमा रश्मीकुमारी घिसिङ, ८२ औँ मिनेटमा एलिसा जाम्बा, ८७ औँ मिनेटमा मञ्जलीकुमारी योञ्जन र खेलको अन्तिम मिनेटमा मनिषा राउतले एक÷एक गोल गरे ।जितसँगै नेपालले महत्वपूर्ण तीन अङ्कसमेत जोडेको छ । समूह ‘बी’मा रहेको नेपाललले दोस्रो खेल आगामी मङ्गलबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ । समूहको दुई टो
एसिया कपमा हारेर पनि जितेको अफगानिस्तान
११ असोज, काठमाडौं । ‘अफगानिस्तानले निकै राम्रो गरिरहेको छ । हामी किन पाकिस्तानसँगको खेलमा मात्रै धेरै ध्यान दिन्छौं मैले बुझेको छैन । अफगानिस्तान पनि ख्याल गर्नुपर्ने विपक्षी हो ।’ भारत र पाकिस्तानको क्रिकेट भिडन्तबारे सोधिएको प्रश्नमा भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविडले दिएको जवाफ हो यो । यो भनाइ अफगानिस्तानका मिडियामा यसरी छायो कि भाइरल नै बनिदियो । एसिया कपको सुपर फोरमा भारतसँग खेल्नुअघि द्रविडले भनेको कुरामा समर्थकलाई खुसी मात्रै होइन, खेलाडीलाई हौसला पनि मिलेको थियो । हुन त अहिले अफगानिस्तान टिम अघि बढ्न हौसला चाहिरहने टिम होइन । तर द्रविडले भने जस्तै भयो, अफगानले भारतसँग ड्र खेल्यो । एसिया कपमा समूह चरणमा श्रीलंकालाई ९१ रन र बंगलादेशलाई १३६ रनले हराएर सुपर फोरमा पुगेको अफगानिस्तान सुपर फोरमा सबै खेल हारेर पनि जितको मानसिकतामा घर फर्कियो । सुपर फोरमा भारतसँग बराबरी खेलेको अफगानिस्
नेपाली राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर विमल घर्तिमगर ए डिभिजन लिग खेल्ने पक्का , कति रकममा जादै छन् त ?
काठमाडौँ – नेपाली राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर विमल घर्तिमगर ए डिभिजन खेल्ने पक्का भएको छ ।विमल घर्तिमगर सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लबबाट खेल्ने भएका हुन् । विमल र क्लबसँग आधिकारीक रुपमा सम्झौता भएपछि एन्फामा भने उनको नाम आजमात्र दर्ता गराइने भएको छ । पछिल्लो समय थ्री स्टार र मनाङबा खेल्दै आएका विमलको अनुबन्धन रकम भने खुलाईएको छैन ।दुवै पक्षले रकम गोप्य राख्ने सहमति भएको च्यासलले जनाएको छ । हाल बंगबन्धु गोल्डकपको तयारीमा रहेका विमलले गएको सिजन मोफसलमा भएका विभिन्न प्रतियोगितमा थ्रीस्टारबाट खेले पनि लिगका लागि भने क्लबले अनुबन्ध नगरेपछि कसले लिन्छ भनेर ठूलो अडकलबाजी भएका बेला त्रिभुवन आर्मी र च्यासलले चासो देखाइरहेका थिए ।तर अन्तिममा उनी च्यासल जाने निर्णय गरेका हुन् । साफ च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तान विरुद्ध १४ वर्षको उमेरमा डेब्यु गरेका विमलले पहिलो खेलमा नै गोल गरेपछि चर्चा
९ असोज, काठमाडौं । एसीसी यु-१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ । छनोट कमिटीले मंगलबार आसिफ शेखको कप्तानीमा १५ सदस्यीय खेलाडी छनोट गरेको छ । त्यस्तै कमलसिंह ऐरी, रोहित कुमार पौडेल, रवि शाह, नन्दन यादव, रित गौतम र पवन सर्राफ पनि टोलीमा परेका छन् । टोलीका अन्य सदस्यहरुमा रविन्द्रजंग शाही, राशिद खान, भिम शार्की, त्रितराज दास, सुन्दीप जोरा, सागर ढकाल, अरुण ऐरी र सुर्य तामाङ रहेका छन् । यु-१९ टिमको म्यानेजरमा केही दिनअघि मात्रै सन्यासको घोषणा गरेका शक्ति गौचन रहेका छन् । त्यस्तै, मुख्य प्रशिक्षकमा विनोद दास रहेका छन् भने साहयक प्रशिक्षकमा मनोज कटुवाल रहेका छन् । यही सेप्टेम्बर २९ तारिखदेखि अक्टोबर ७ तारिखसम्म बंगलादेशमा एसिया कप हुदैछ । नेपाली यु-१९ क्रिकेट टिम यही २७ तारिखमा बंगलादेश प्रस्थान गर्दैछ । - From : Onlinekhabar
अफगानिस्तानको अर्को तारिफयोग्य प्रदर्शन, भारतलाई रोक्यो
१० असोज, काठमाडौं । युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटअन्तर्गत सुपर-फोरको खेलमा क्रिकेटको पावरहाउस मानिएको भारतलाई अफगानिस्तानले बराबरीमा रोकेको छ । मंगलबार राति दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा भारतसँग बराबरी खेल्दै अफगानिस्तानले अंक बाँडेको हो । यद्यपी अफगानिस्तान सुपर चारबाटै बाहिरिएको छ । अफगानिस्तानले दिएको २५३ रनको चुनौति पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको भारतले ४९.५ ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा २५२ रन बनाएपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो । भारतका लागि लोकेस राहुलले ६०, अम्बाती रायडुले ५७ र दिनेश कार्तिकले ४४ रन बनाएपनि जित दिलाउन भने सकेनन् । त्यस्तै, भारतका लागि एक दिवसीय क्रिकेटमा २००औं कप्तानी गरेका महेन्द्रसिंह धोनीले ८ रन बनाए । बलिङतर्फ अफगानिस्तानका अफ्ताब आलम, मोहमद नाबी र राशिद खानले समान २-२ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले ५० ओभरमा ८ विकेट ग
काठमाडौं । फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड लुका मोडरिकले जितेका छन् । १० वर्षदेखि लिओनल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डाको दबदबा रहेको यो अवार्ड यो पटक क्रोएसिया तथा रियल मड्रिडका मिडफिल्डर मोडरिकले तोडेका हुन् । यो पटक मेस्सी अन्तिम तीनको मनोनयनमै परेनन् भने मोडरिकले रोनाल्डो र मोहम्मद सलाहलाई पछि परे । उनले २९.०५ प्रतिशत मत पाए भने रोनाल्डोले १९.०८ र सलाहले ११.२३ प्रतिशत मत पाएका थिए । मड्रिडले लगातार तीन पटक च्याम्पियन्स लिग जित्दा टिमका महत्वपूर्ण सदस्य रहेका उनले क्रोएसियालाई विश्वकपको फाइनलसम्म पुर्याएका थिए । उनले रोनाल्डोलाई पछि पार्दै यूईएफए प्लेयर अवार्ड पनि जितेका थिए । ब्राजिलकी मार्टाले महिला उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेकी छन् । फ्रान्सलाई विश्वकपको उपाधि दिलाएका डिडियर डेसच्याम्प उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए भने उत्कृष्ट गोलका लागि पुस्कास अवार्ड मोहम्मद सलाहले पाए
विश्वकै चर्चित बलर मध्येका नेपालका सन्दीप लामिछानेलाई अर्को सुनौलो अवसर, केरला किंग्सबाट खेल्ने पक्का
काठमाडौं- छोटो समयमै नेपाली क्रिकेट टिमका चर्चित तथा महत्वपूर्ण खेलाडी बन्न सफल सन्दिप लामिछानेले फेरी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न अवसर पाएका छन् ।सानै उमेरमा चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल सन्दिपले धेरै फ्यानहरु कमाएका छन्।उनले नोभेम्बरमा यूएईको सारजाह क्रिकेट मैदानमा हुने टी टेन क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका हुन् ।उक्त प्रतियोगितामा उनी डिफेन्डिङ च्याम्पियन केरला किंग्सबाट खेल्ने पक्का भएको छ ।सन्दीपको टिममा संसारका विख्यात क्रिकेटरहरु इयान मोर्गनको रहेको उक्त टिममा क्रिस गेल, सोयव तनवीर, किरन पोलार्ड, पल स्टर्लिङ, दासुन संखा, जुनेद खान र टम कुरान पनि रहेका छन् ।यसअघि ४ दिनमै सकिएको प्रतियोगिताको यो दोस्रो संस्करण हो जुन १० दिनसम्म चल्नेछ । पहिलो संस्करणमा ६ टिमले सहभागिता जनाएकोमा यसपटक ८ वटा टिम सहभागी हुँदैछन् ।राउण्ड रोविन लिग प्रणाली र प्लेअफ गरी १३ खेल खेलिने प्रतियोगि
एसिया कपको फाइनलमा बंगलादेश र पाकिस्तानमध्ये कुन ?
८ असोज, काठमाडौं । युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटको सुपर चारमा बंगलादेशले अफगानिस्तानमाथि ३ रनको रोमाञ्चक जित निकालेसँगै फाइनलमा बंगलादेश र पाकिस्तानमध्ये कुन टिम पुग्ला ? निकै रोचक बनेको छ । युएईको अबुधावीस्थित शेख जायद रंगशालामा आइतबार राति सम्पन्न खेलमा अफगानिस्तानलाई ३ रनले पराजित गर्दै बंगलादेशले फाइनल पुग्ने आफ्नो सम्भावनालाई जिवितै राखेको छ । यता, भारतसँग पाकिस्तान ९ विकेटको लज्जास्पद हार ब्यहोरेपनि फाइनल पुग्ने सम्भावना भने कायमै रहेको छ । भारत भने लगातार २ खेलमा जित हात पार्दै सुपर चारको अन्तिम खेल खेल्नुअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको छ । बंगलादेशले रोमाञ्चक जित हात पार्ने क्रममा अफगानिस्तानलाई पुरै ५० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २४६ रन मै रोक्न सफल भएको थियो । बंगलादेशले दिएको २५० रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानका हास्मतउल्लाह शाहिदी र मोहमद शाहजादले अर्धशक बनाएपन
आफुले चिताएको पुरा गरि दिने एक अद्भुत जिरेश्वारी महादेव
ओलम्पिक खेलमा प्रति खेडाली १५१५ वटा कन्डोम बाँडिएको थियो ….
रातको तेस्रो प्रहरमा किन हुन्छन् मृत्युका घटना पुरा पढ्नुहोस् ?
७ दिन सम्म यसो गर्नुभयो भने कहिले पैसाको कमि हुने छैन, जानी राखौ…
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,927)
मगर्नी भाउजूको कथा (13,530)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,496)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,060)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,593)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,461)
तीन वर्षसम्मको बच्चालाई के खुवाउने, के नखुवाउने ?
ॐ….गणेशय नम मन परे सेयर गर्नुहोस् ( भिडियो सहित )
एक आँखे बाच्छी भगवानको दुर्लभ अवतार भन्दै दर्शन… [भिडियो सहित]
रोचक खबर (2,835)